Halkaan waxaa ku jira waxqabadyadeena ku taxan aagga ololaha.
Tallaabooyinka ku habboon waa in la helaa.
Vogelschiss gegen Hass - kaarka cas ee waraaqaha nacaybka lagu diro
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 16. January 2013
Xusuusnow maanta, ka dhanka ah #Hate hadda waxaa jira shabaqa Fiqiira. @PixelHELPER waxay u dirtaa xaarka shimbiraha qof kasta oo faafiya nacaybka. Ku deeqo paypal@PixelHELPER.tv & noo soo qor cidda ay tahay in la keeno foosha xigta. Xarafka 1aad wuxuu aadayaa @_donalphonso laga bilaabo @world
In hooska anshaxeed ee rakibaadda farshaxanka #Fencing4Humanity, beddelaad ah xadka dibedda ee Yurub, shimbiraha ugu horreeya ayaa degeen. Laga soo bilaabo halkan waa leh #Bird shit ka dhanka ah #Hate la diriray internetka.
Xarunta Vogelschiss ee Morocco
Waddanka fog ee Morocco waxaan hadda ka dhiseynaa xarunteena Vogelschiss si aan ugu diro baqshado yar yar oo Vogelschiss ah dadka isu muujiya #HateSpeech.
Shimbiraha ayaa si fiican u qaata geedaheena
Shimbirta ka shaqeysa nacaybka
Dhismaha rugta xayawaanka
Vogelschiss gegen Hass - kaarka cas ee waraaqaha nacaybka lagu diro Juun 15th, 2020Oliver Bienkowski
Matxafka SamuelPaty ee Diinta diinta & Xorriyadda Fanka
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 10. Febraayo 2012
U wac dhismaha Matxafka Dabiiciga Diinta & Xorriyadda Fanka ee Samuel Paty
Dilkii Samuel Paty waa inaan la ilaawin waligiis. Farshaxanka waa inuusan mar dambe sabab u noqon argaggixisada inay laayaan dad kale. Xorriyadda farshaxannimada ayaa ka sarraysa xorriyadda diinta. Waxaan ku martiqaadeynaa fasalada iskuulada ee dhamaan Yurub inay soo booqdaan bandhigeena ku saabsan jees jeeska diinta. Sida goob casri ah oo loogu talagalay xorriyadda farshaxanka, bandhiggeenna waxaan ku soo bandhigi doonnaa taariikh-soo-jeedinta taariikhda qosolka diinta ee Yurub oo dhan dhawr maalmood. Waxaan u baahanahay kaalmadaada si aan u soo iibsano una qalabeyno konteynarrada badda ee la soo bandhigayo. Dhamaan Yurub waa inay u wada istaagaan xorriyadda hadalka iyo sawirada. Fadlan ololeheena u gudbi dhammaan asxaabta ku jirta dhammaan waddamada Yurub si aan si dhakhso leh ugubilaabno bandhiggeena wareega ee xorriyadda farshaxanka. Qof kasta oo wax bixiya wuxuu leeyahay gelitaan bilaash ah oo nolosha ah oo loogu talagalay Matxafka 'Pop Up Museum' ee Cunnada Diinta leh.
Madxafka guurguura ee guurguura waxaan ula safri doonnaa dhammaan waddamada Yurub.
Xusuusteenii xasuuqa ee Morocco waa la dumiyey, CNN ayaa werisay
CNN oo ku saabsan mashruuceena Morocco
Matxafka SamuelPaty ee Diinta diinta & Xorriyadda Fanka Febraayo 24th, 2021Oliver Bienkowski